I-Centrifugal Ultrasonic Reactor Yokwahlukana - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher Ultrasonics iklanyelwe izigameko ezivamile ze-ultrasonic ngezinqubo ezikhethekile. I-reactor centrifugal isetshenziselwa izinqubo zokuhlukanisa ultrasonically. Lokhu kufaka hlangana ukuhlukaniswa kwegesi namtjhana ukuqina kwamanzi.
I-media media ingena ku-reactor nge-speed at speed. Lokhu kudala ukunyakaza okukhulu kwe-circular nge-centrifugal force. Ngenxa yalokho, ukucindezela kuphakama kusuka enkabeni kuya emdongeni wangaphandle.
Ukuxhaswa Nge-Ultrasonically Assisted Nokuzikhethela
Esinye isici esivelele saleli reactor ye-centrifugal yi-degassing ehambisana ne-ultrasonically kanye nokwehliswa kwemithombo yamanzi. Kulesi simo, ukudumazeka kwe-ultrasonic kuvame ukuhlanganiswa nodonga olungaphandle lwesiguquko. Ngakho-ke, i-sonication iyathinta izindawo ezicindezelayo kakhulu. Gas Bubbles owadalwa ultrasonication ukuthuthela kuya maphakathi reactor. I-concentration ephakeme ye-bubbles bubbles eduze nesikhungo esiphansi kwengcindezi ye-reactor ikhuthaza ukwakheka kanye ne-coalescence yamabhulegesi amakhulu amakhulu.
Ukuhlanza nokuhlukaniswa kwezinhlayiyana
I-Ultrasonication ingahlukanisa izinhlayiya ze-particle agglomerates, ihlanzekile izinhlayiyana ezicwengekile futhi kuncishiswe i-viscosity ye-shear thinning noma iziphuzo ze-thixotropic. Le miphumela isetshenziselwa i-ultrasonically yasiza izinhlayiyana zokuhlanza nokuhlukaniswa. Kule nqubo, ukududuza kwe-ultrasonic kungaxhunyaniswa ne-sonotrode phakathi nendawo ye-reactor kanye / noma emdongeni wangaphandle we-reactor.
Amandla we-centrifugal aqoqa izinhlayiya ezilukhuni esifundeni sangaphandle se-reactor. Njengoba ingcindezi iphakeme kule ndawo, kunjalo nokuqina kwe-sonication. I-vibration ye-ultrasonic kanye ne-cavitation ibangela ishear enganciphisa i-viscosity ye-shear thinning noma ama-slurries we-thixotropic. Lo mphumela uhlinzekela ukuhlukaniswa kwezinhlayiyana.
I-Centrifugal Ultrasonic Reactor ye-Degassing
Ukusuka kuLinga Lokuhlola ku-Pilot Scale nokukhiqiza
I-reactor centrifugal iyatholakala kuwo wonke amadivaysi ochungechunge we-Hielscher UIP. Ukuhlolwa kokuhlola, sincoma ukusebenzisa i-UIP2000hdT. Leli yunithi ingaxhunyaniswa ne-sonotrode yesisekelo noma udonga lwangaphandle lwama-reactor, ngokulandelana. Amanani okugeleza okujwayelekile okwenziwa kulo mdlalo aphakathi kuka-1 no-80m3 ngehora. Imishini ye-Hielscher ultrasonic iklanyelwe ukulingana okulinganiselwe kuya ekukhuleni okukhudlwana kokuqhutshwa komshini wokulinganisa noma wokukhiqiza. Ukufakelwa kwe-Hielscher kuboniswe ukusebenza ngokuthembekile kumanani aphezulu okugeleza. Ithebula elingezansi libala uhlu lokucubungula nezinsizakusebenza zokuphakanyiswa.
0.5 kuya ku-10m3/ ihora I-UIP2000hd
1 kuya ku-20m3/ ihora UIP4000
4 kuya ku-80m3/ ihora UIP16000
I-Vortex ku-Centrifugal Ultrasonic Reactor